गायिका एवं कलाकार शितल शर्माद्वारा ढोरपाटन बाढीपीडितका लागि सहयोग जुटाउँदै3Ghumti
मनोरञ्जन | 2020-09-08 13:18:00 |
काठमाडौ, भदौ २३ । गायिका एवं कलाकार शितल शर्माले बाग्लुङको ढोरपाटन बाढीपीडितका लागि सहयोग गर्न आर्थिक सहायता जुटाउँदै छिन् । कलाकार शर्माले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेकी छिन् ।
गत भदौ १७ गते बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित भुजी खोलामा आएको बाढीले कयौं व्यक्तिहरुका घरबार बगाएको थियो भने बाढीका कारण १७ जना व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त बाढीका कारण अझै २२ जना व्यक्तिहरु बेपत्ता भएको बताईएको छ । बाढीले भुजी खोलाका तटिय क्षेत्रका ३१ भन्दा बढी घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् भने करिब ४० भन्दा बढी घरमा क्षति भएको छ ।
बाढी पहिरोका कारण आफन्त गुमाएका र घरबारविहीन भएका परिवारलाई सहयोग गर्न गायिका शर्माले सहयोग अभियान चलाएकी हुन् । ‘बाढी पहिरो आएर ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ९ मा कयौं व्यक्तिहरु बेपत्ता भएका र घर समेत बगाएको समाचार सुन्ने बित्तिकै मेरो मनमा सहयोगको भावना आईहाल्यो ।’
गायिका शर्माले भनिन, ‘बाढी पीडितका लागि थोरै भएपनि सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो र मैले देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई सहयोगको आग्रह गरें ।’
‘मलाई धेरै व्यक्तिहरुले सहयोग गरिरहनुभएको छ ।’ उनले जोड दिंदै भनिन्, ‘सहयोग गर्छु भनेर अरु व्यक्तिहरुबाट फोन, म्यासेज आईरहेको छ । सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुको बारेमा मैले फेसबुक मार्फत उहाँहरुको नाम सार्वजनिक गरेकी छु ।’
यस किसिमको सहयोग मानवताको नाताले पनि गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । गायिका शर्माले आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने क्रम जारी रहेको बताईन् । केही दिनपछि बाढीपहिरो आएको ठाउँमा गई पीडितहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने उनले बताईन् ।
गायिका शर्माले अहिलेसम्म डेढ लाख रुपैयाँ उठिसकेको र अझै सहयोग आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिईन् । बाढी पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने उद्देश्यले सहयोग अभियान सुरु गरेको उनको भनाई छ । बाढीपीडितहरुलाई सहयोग गर्ने सबै मनकारी व्यक्तिहरुलाई उनले धन्यवाद दिंदै भनिन्, ‘मान्छेलाई दुःख पर्दा सबैले सहयोग गर्ने हो । यदि कसैको ईच्छा भए सहयोग गर्न अपिल गर्दछु ।’
काठमाडौ, असोज ११ । ‘न सहारा दिन्छ तिम्रो मायाले, न छुट्करा दिन्छ तिम्रो मायाले ।’ ‘यो कस्तो...
काठमाडौं । मान्छे धन सम्पत्ति भए पुग्छ तर धनसम्पत्ति केही होइन भन्ने सन्देश एकातिर छ भने अर्को...
‘त्यही हो मेरो देश’ सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत गीत ‘त्यही हो मेरो देश’ सार्वजनिक भएको छ । देशको बखान...
काठमाडौ, असोज ९ । देश विदेश एकसाथ प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र &...
फिल्म ‘लक्ष्मीपूजा’ यही दशैंमा रिलिज हुने
काठमाडौं । सलोन सलिना फिल्मस्को व्यानरमा निर्माण भइरहेको फिल्म ‘लक्ष्मीपूजा’ यही दशैंमा...
काठमाडौं । बिस्तरै नेपालीहरुको महान पर्व बडा दशैं तथा दीपावाली नजिकिंदै आएको छ । यी चाडवाड...
काठमाडौ, असोज ५ । विगत २० वर्षदेखि ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट इन्टरनेट सेवाप्रदानगर्दै आएको...
‘ओछे नारा म्हैना’ कभर भिडियो प्रतियोगिता, प्रथम हुनेलाई ५० हजार
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न जातजातीहरु बसोवास गर्दछन् । हरेक जातजातीको आ–आफ्नै रितिरिवाज...
‘दिलको राजधानी’मा शिल्पा र दुर्गेश रोमान्स्
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालः सौगितिक बजामा निकै चर्चा बमाउन सफल मोडल तथा गायक दुर्गेश थापा र...